Hondrogaard - irbado
Calaamadaha xanuunka iyo xanuunka daran ee cudurrada nidaamka muruqyada ayaa ka yimaada cudurada dheef-shiid kiimikaadka ee ku jira unugyada calool-marijirta ah iyo la'aanta dheecaan maqaarka ah. Si loo soo celiyo nidaamyadan, Chondroguard waxaa loo isticmaalaa - cirbado ku saleysan caawimadan daroogada si dhakhso ah uga takhalusto calaamadaha aan fiicneyn iyo raaxo la'aanta iyo hagaajinta dhaqdhaqaaqa. Waxaa intaa dheer, natiijooyinka la helay oo wakhti dheer ah.
Waxyaabaha Hondroguard ee foomka xal ah ee irbadaha
Walxaha firfircoon ee wakiilku waa chondroitin (sodium sulfate). Waa polysaccharide culeyskiisu weyn yahay oo awood u leh soo saaridda waxyaabahan soo socda:
dhimista isbeddelada isbeddelka ee unugyada calool-xanuunka;
hoos u dhac ku yimaada xoojinta xanuunka xanuunka;
Dardargelinta hababka kareemka iyo dib u soo noqoshada dareeraha;
kicinta dacaayadda proteoglycan;
kordhi xaddiga dhaqdhaqaaqa ee kudubyada waxyeelada leh.
Qaybaha soo socda ayaa loo isticmaalaa qaybo caawimaad leh:
biyaha lagu muday.
Tilmaamaha loogu talagalay daawada rijeetada ee Chondrogard
Muuqaal muhiim ah oo ka mid ah daawada su'aashu waa awoodda chondroitin in ay ku ururiso unugyada calool-marijirta, mashiinka synovial-ka ma faragalin geeddi-socodkan. Xaddiga ugu badan ee walxaha ku jira naqshadda kiciska ah ayaa la gaaraa ka dib 48 saacadood.
Iyadoo loo eegayo ficil deg-deg ah, Chondrogard waxaa loo soo qoray daaweynta cudurada waxyeellada ah ee ka yimaada laf-dhabarka iyo xubnaha, kuwaas oo ay ku jiraan osteoarthritis . Waxaa haboon in la ogaado saameynta la taaban karo ee lagu duro faafinta Chondroguard waxaa lagu soo saaraa daaweynta dhaawacyada dhabarka, gaar ahaan osteochondrosis, labadaba foomamka ba'an iyo kuwa daba dheer.
Intaas waxaa dheer, diyaargarowga lagu sharaxay waxaa lagula talinayaa jabka. Hawlgalku wuxuu kor u qaadayaa samaynta dardargelinta callus lafaha, halkan, si dhakhso ah u dhaqso.
Sidee si sax ah u sameeyaan duritaanka Hondroguard?
Nidaamka isticmaalka ayaa soo jeediyay in la isku duro qalabka daroogada. Qiyaasta halmar waa 100 mg of chondroitin sodium sulfate, taas oo u dhiganta 1 ml of xal Hondroguard.
Haddii daaweyntu si fiican u dulqaadanayso, qadarku wuxuu kordhi doonaa mustaqbalka, laga bilaabo cirbada 4aad, mugga wuxuu gaaraa 200 g (2 ml). Qalabka guud ee daaweynta waxaa ka mid ah 25-30 irbado, waxaa lagu celin karaa lixdii biloodba mar.
Marka loo eego Hondroguard, qiyaasta daawadu waxay la mid tahay dardar-celinta lafaha iyo sameynta lafta lafta. Hase yeeshee, koorsada daaweyntu aad ayay u yar tahay, laga bilaabo 10 ilaa 14 maalmood.
Ka hor inta aan la bilaabin nidaamyada taxanaha ah waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in maqnaanshaha ka hortagga isticmaalka daawada:
ciriiri-darrada loo yaqaan 'chondroitin' ama 'daawooyinka';
uurka iyo nuujinta.
Miyuu jiraa qolofta loo yaqaan 'chondroguards'?
Daawadan, sida caadiga ah, si fiican u dulqaadan bukaanka. Xanuun aan ba'an lahayn inta lagu jiro mudista. Marmarka qaarkood, goobta cirbadda lagu gooyo, dhacdooyinka dhiigbaxa (xuubka, barar) ayaa dhici karta. cuncun, cuncun, casaan, ama urtikaria. Hase yeeshee tani maaha mid sabab u ah tallaabada daawada lafteeda, sababta keentay waa cillad maqaarka maqaarka ah, cirbadda ayaa ku dhufatay marinka dhiigga.
Ma samayn karaa irbadaha Chondrohard maalin kasta?
Sida ku qoran tilmaamaha, macnaheedu waxa weeye in la isticmaalo 48 saacadood kasta (24 saacadood ka dib). Sidaa darteed, cirbadaha maalinlaha ah waa mid aan loo baahnayn. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax khatar ah oo ay sabab u tahay xad dhaaf xad-dhaaf ah ee Hondrogard, marka xaalado dhif ah daroogada ayaa loo qori karaa maalin kasta, laakiin koorso gaaban.
Jab oo calcaneus ah
Heerka ugu horeeya ee dhiig-yari
Maxaan ku qaataa cadaadis hoose?
Daaweynta dhuun xanuunka oo leh antibiotics ee dadka waaweyn
Prothrombin waa caadada
Eye hoos udhaca
Saliid ka soo boodada
Maareynta sanbabada ku jirta daroogada
Candidiasis afka - calaamadaha
Macaroni leh broccoli
Nolosha shakhsiga ah ee matala Matthew Perry
Sulfil Horse - Guryaha dawooyinka iyo ka hortagga
Ku dhuuji kari
Dharka carruurta ee eyda
Timaha timaha timaha
Sameynta dulqaadashada carruurta ee dugsiga barbaarinta
Recipe for burka guriga
Iidaalka Badbaadinta Kaniisadda Quduuska ah
Hiller loogu talagalay dhiirigelinta
Falanqaynta loogu talagalay dadka yaryar - waa maxay?
Sidee loo miisaamaa miisaanka oo ma jebin karaa?
Nooca nooca ah waa nubuck?
Sidee loo cabbiraa heerkulka asalka?
Waxyaabaha kor loogu qaado timaha
Qalajiyaha timaha leh buraashka
Sharon Stone ayaa shaaca ka qaaday sababta uu u maqnaa muddada dheer